Mayelana NATHI - Suzhou Marcospa
USuzhou Marcospayasungulwa ngo-2008 onguchwepheshe ukukhiqizwa umshini phansi, ezifana grinder, ipolisha kanye uthuli ngalendoda. Imikhiqizo esezingeni eliphakeme, esefashinini, esetshenziswa kabanzi enhlobonhlobo yezakhiwo, ayigcini nje ngokuba nenqwaba yemakethe yokuthengisa yasekhaya, kepha futhi ithunyelwa eYurophu nase-United States.
Ihinge likaMarcospa eminyakeni edlule belilokhu lithobela "ikhwalithi yemikhiqizo ukuze lisinde, lithembeke kanye nezinsizakalo zentuthuko" ngezinjongo zebhizinisi. Uzibophezele ukukunikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezisezingeni. Iba neqembu lobungcweti, elizinikele ekuphathweni kokuklanywa, kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukwenziwa kwesikhunta, ukubumba kumhlangano woMkhiqizo, ngesici ngasinye nezinqubo zivivinya kanzima futhi zilawulwe.
Eminyakeni embalwa edlule yokukhiqiza nokuphatha kanye nokuhlola, iMarcospa isungule uhlelo lwayo lokuphathwa kwekhwalithi. UMarcospa uhlala esebenzisa umqondo wokwakhiwa kwamanani wamakhasimende wemikhiqizo eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukahlukene, futhi ngokuqhubekayo ahlinzeka amakhasimende ngezixazululo nezinkinga zobuchwepheshe. Ukuqhubeka nokuhlola nokwenza izinto ezintsha, nokwenza kahle.
Sidlule isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001, kanti eminye imikhiqizo isidlulile isitifiketi se-European CE. Ukuze kuqinisekiswe ukuqhutshwa komkhiqizo okuqhubekayo kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva, iqembu labakhi bezinsizakalo zokwakha kanye nangemva kokuthengisa baqeqeshiwe ukucwaninga ngobuchwepheshe nokuthuthukisa, ukuklama, nokukhiqiza ukuqoqwa kothuli lwezimboni nemishini yokususa uthuli. Ibhizinisi elihlanganisa ukuphathwa kwentuthu nothuli, elinemikhiqizo ephelele, engahlangabezana nezidingo ezizungezile zenqubo yokukhiqizwa kwemboni, futhi inikeze isisombululo esiphelele. Imikhiqizo yakwaMaxkpa ihlangabezana nemithetho nezinkomba ezahlukahlukene zokuphepha kwamazwe omhlaba. Imikhiqizo ihlolwe yaqinisekiswa yizikhungo zomhlaba wonke. Amakhasimende ahlinzeka ngeziqinisekiso zokuphepha zokukhiqizwa kwezimboni.
Uchungechunge lomkhiqizo lwamanje lubandakanya ama-vacuum cleaner ezimboni, abaqoqi bezintuli zezimboni, izinto zokuhlanza intuthu, izihlanza zokuphefumula ezinomoya womoya, idizayini yokususa uthuli kanye nokuguqulwa kokufakwa, izinhlelo ezisekela imishini nezinye izixazululo zokususa uthuli jikelele. Imikhiqizo ye-Ingmar isetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwensimbi, okokusebenza kwemishini, ukukhiqizwa kwezimoto nemikhumbi, Imithi nokudla, izingubo zokuvikela, amakhemikhali amahle, ukundiza ngesitimela esinejubane elikhulu, ubufakazi bokuqhuma nezinye izimboni!